Sina 36W Alemà famonoana herinaratra UV famokarana trano sy mpamatsy | Kanfur
1. Parameteran'ny jiro germicidal UV
TOSIKARATRA: 110V / 220V
Fitaovana Tube: Jiro UV Quartz
Halavan'ny onja: 253.7nm
Fiainan'ny serivisy: 8000 ora
Function: Fotoana telo-gear (15min, 30min, 60min), fanemorana fanombohana ary fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby.
Fenitra plug: fenitra nasionaly, fenitra amerikana (fanamarinana UL), fenitra eropeana.
Size: 14 * 14 * 44 (CM)
2.Inona ny teknolojia UV?
Ny hazavana Ultra-Violet (UV) dia tsy hitan'ny mason'olombelona ary mizara ho UV-A, UV-B ary UV-C.
UV-C dia hita ao anatin'ny faritra 100-280 nm. Ao amin'ny sary dia azo jerena fa ny hetsika germicidal dia avo indrindra amin'ny 265 nm miaraka amin'ny fihenan'ny andaniny roa. Ny jiro UV-C misy tsindry ambany dia manana ny famoahana lehibe indrindra ao amin'ny 254 nm izay ny hetsika amin'ny ADN dia 85% amin'ny sandan'ny tampony ary 80% amin'ny fiolahana IES. Vokatr'izany, ny jiron'ny mikraoba dia mandaitra tokoa amin'ny fanapotehana ny ADNan'ny zavamiaina bitika. Midika izany fa tsy afaka mamerina sy miteraka aretina izy ireo4.
Miovaova be ny fanoherana mahomby amin'ny zavamiaina bitika amin'ny hazavana UV. Ankoatr'izay, ny tontolon'ny zavamiaina bitika manokana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fatra taratra ilaina amin'ny famotehana azy.
3.Inona avy ireo tombony azo amin'ny Jiro UV-C Germicidal?
Ozone sy Ozone afaka, Remote Powered
Ny jiro UVC germicidal dia mampihena ny viriosy ary manadio ny rivotra. Ny jiro UVC misy jiro UVC maro koa dia mamoaka ozone, afaka mahatsapa ny fanamorana azy amin'ny tontolo iainana
Ny jiro UVC koa dia miaraka amin'ny lavitra tsy misy tariby mba hahamora kokoa ny fampiasana sy ny fiarovana.
Tsy maintsy atao ny miasa amin'ny tanana. Miaraka amin'ny tsindry bokotra iray, eo an-tampon'ny The Apollo na amin'ny halavirana azo antoka - dia mijanona ny bakteria, mikraoba ary virus.
Tsindrio fotsiny ny bokotra herinaratra na ampiasao ny lavitra amin'ny halavirana azo antoka ary manomboka manelingelina ny ADN sy ny RNA ny pathogen ny jiro Germicidal UV ary very ny tanjaka sy ny asany. Mora be ny mampiasa azy, toy ny majia izy io.
Previous: 36W Jiro famonoana otrikaina uvc azo zahana uvc 36W
Manaraka: Volavola vaovao 35W UV famonoana jiro ho an'ny fanamafisam-peo ao anaty
sterilization maivana amin'ny tananao uv
jiro uv azo entina
jiro famonoana otra
jiro germicidal ho an'ny trano
uv hazavana ultraviolet
Hopitaly azo entina amin'ny hopitaly desinfec ...